musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Novair inogamuchira yayo yekutanga A321neo
Airlines • Kuputsa Kufamba Nhau • Denmark Kuputsa Nhau • nhau • Norway Kuputsa Nhau • Sweden Kupwanya Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Sweden charter ndege yendege Novair, yatora kuendesa yayo yekutanga A321neo pachibvumirano kubva kuAir Lease Corporation (ALC). Iyo A321neo ichabatana neNovair yazvino Airbus zvikepe zveA320 Mhuri nendege.
Ndege yakagadzirirwa zvigaro zve 18 masendimita yakafara mukirasi imwechete 221 mutyairi wevatakuri. Inofambiswa neCFM LEAP-1A injini, iyo A321neo ichave yakavakirwa muStockholm uye inoshanda charter ndege kubva kuSweden, Denmark neNorway kuenda kunzvimbo dziri kumaodzanyemba kweEurope neEjipitori.
Iyo A320neo Mhuri inosanganisa matekinoroji achangoburwa anosanganisira enjini nyowani dzechizvarwa nemaSharklets, ayo pamwe chete anounza angangoita gumi neshanu muzana mafuta anochengetwa pakusvitswa uye makumi maviri muzana mugore ra15 pamwe ne20 muzana yekudzora ruzha. Iine anodarika zviuru zvishanu mirairo yakagamuchirwa kubva kune vatengi makumi mapfumbamwe nemaviri kubvira payakatangwa muna2020, iyo A50neo Mhuri yakatora zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvemusika.